हाम्राे पिपलबाेट » उद्योगी व्यवसायीको हक अधिकार संरक्षणका लागि उम्मेद्वारीः भट्टराई उद्योगी व्यवसायीको हक अधिकार संरक्षणका लागि उम्मेद्वारीः भट्टराई – हाम्राे पिपलबाेट
उद्योगी व्यवसायीको हक अधिकार संरक्षणका लागि उम्मेद्वारीः भट्टराई
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी उम्मेदवारहरुलाई अहिले मतदाता फकाउन भ्याइनभ्याइ छ । यही फागुन २२ गते संघको निर्वाचन हुँदैछ । चुनावी एजेण्डासहित मतदातामाझ पुगेका उम्मेद्वारहरुले व्यवसायिक हकहित र सुरक्षाका सवालमा प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । दुई समूह बनाएर चुनावी मैदानमा होम्मिएका व्यवसायीहरु यो निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको लडाई बनाएका छन् । तर युवा तथा चर्चित युवा व्यवसायी प्रदिप भट्टराई यो चुनावलाई स्वभाविक ठान्छन् । लक्ष्मणराज पौडेल नेतृत्वको लोकतान्त्रीक समावेशी व्यवसायी समूहको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार समेत रहेका प्रदिप भन्छन्–‘जस्ले जितेपनि व्यवसायिक सुरक्षा र अधिकारको सवालमा काम गर्ने हो, म व्यवसायीक मुद्धामा अग्रस्थानमा रहेर काम गर्न सक्छु भनेरै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होम्मिएको हुँ ।’ उनले यसो भनिरहँदा संघको नेतृत्वमा उनले कुशलता पूर्वक विभिन्न पदमा रहेर भूमिका निभाइसकेका छन् । त्यसैले त उनी कोहलपुरमा रुचाइएका युवा व्यवसायीको रुपमा आफुलाई स्थापित गरिसकेका छन् । सामाजिक संघसंस्थामा समेत उत्तिकै सक्रिय प्रदिपका उम्मेदवारी एजेण्डाबारे पीपलबोट दैनिकका रिर्पोटर श्याम विष्टले कुराकानी गर्नु भएको छ ।
१. चुनाव नजिक आइसक्यो, कस्तो छ चुनावी माहोल ?
– चुनाव निकै उत्साहपूर्वक चलिरहेको छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो टिम मतदाता भेटघाटमा व्यस्त भइरहेको छ । अधिकांश मतदातालाई भेटिसकेका छौं । कोहलपुरका केहि मतदातालाई पनि भेट गरिसकेका छौं । हिँजोआज भने कोहलपुर नगर क्षेत्रमै केन्द्रित भएर चुनावी अभियानमा छौं । व्यापारीहरुको सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ । हामी व्यापारीहरुको साथ र सहयोगका लागि अनुरोध गरीरहेका छौं ।
२. घरदैलोका क्रममा मतदाताबाट कस्तो प्रतिक्रिया आईरहेको छ ?
– विभिन्न क्षेत्रहरुबाट क्षेत्रगत र बस्तुगत व्यवसायीको समिश्रण भएको सबैभन्दा बलियो टिम नै हाम्रो हो । सम्पूर्ण समावेशीमा आस्था र विचार राख्ने मतदाताको समर्थन त शतप्रतिशत नै हामीहरुलाई छ । हामीलाई विशेष गरी यस क्षेत्रका व्यापारीहरुको साथ रहेको छ । म शुद्ध व्यापारी भएकाले यस पटक शुद्ध व्यापारीलाई जिम्मेवारी दिनेछन् भन्ने विश्वास लिएको छु । यस भन्दा फरक आस्था विचारका मतदाताहरु दिनप्रतिदिन हामीप्रति आकर्षित हुँदै गइरहेको अवस्था
छ । हामीहरु घरदैलोमा पुग्दा मतदाताहरुले गरेको स्वागत र सद्भावले पनि हाम्रो अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।
३. मतदाताले तपाईलाई किन भोट हाल्ने ?
– करिब १६ वर्षदेखि यहि पेशामा आवद्व छु । म यस संस्थाको नेतृत्व गर्न चाहान्छु । म शुद्व व्यापारी हुँ । व्यापारीका पिरमर्का, उद्योग तथा व्यवसायिक क्षेत्रका समस्याहरुलाई मैले नजिकबाट पहिचान गरेको छु, भोगेको छु, बुझेको पनि छु । मेरो कर्मक्षेत्र उद्योग व्यापार भएकाले यस क्षेत्रका समस्याहरुको समाधान गर्ने मेरो उम्मेद्वारीको प्रमुख उद्देश्य हो । त्यस्तै व्यापारीका हक र अधिकार स्थापित गराउनेका लागि मलाई व्यवसायीहरुको भोट आवश्यक छ । किनभने जुनखालका समस्या यहाँका उद्योगी व्यवसायीले झेल्दै आएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि व्यवसायीहरुले हाम्रोलाई जिताउनु हुनेछ भन्ने आत्मा विश्वास हाम्रो टिममा छ । यो भन्दा अगाडी संघको सदस्य र उद्योग तर्फको उपाध्यक्ष भई काम गरी सकेको हुँ । पदमा हुँदा गर्न अपुरा कामहरु वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर पुरा गर्ने सपना बोकेको छु । यस पटक पनि व्यवसायीहरुले संघको जिम्मेवारी दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
४. तपाईको उम्मेद्वारी केका लागि ?
– यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीको पेशागत हकहित र संरक्षणको लागि कुशल नेतृत्व प्रदान गर्न म र मेरो टिमको उम्मेद्वारी हो । पछिल्लो समय वाणिज्य संघप्रति नैराश्यता हँुदै आएको छ । नैराश्यता हटाएर उद्योगी व्यवसायीलाई संघ आकर्षण बढाउन मेरो प्राथमिकता रहने छ । साना ठुला, मझौला लगायत सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनको प्रत्याभुति दिलाउने वातावरण बनाउने छु । संघमा विधि विधानको सर्वोच्चता स्थापित गराउने छु । अर्थात संघको विधान समय सापेक्ष, व्यवसायीको भावना र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने मेरो समूहले प्रमुख एजेण्डा हो । व्यवसाय मैत्री र लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्न दबाब सृजना गर्ने छु । व्यावसायीहरुको घरभाडा सम्बन्धि समस्याका कारण घरबेटी र व्यापारीहरु बिचको दुरी घटाई समन्वय हुने गरी घरभाडा सम्झौताको व्यवस्था मिलाउनेका लागि हाम्रो उम्मेद्वारी रहेको छ । त्यस्तै राज्यका विभिन्न सरकारी कार्यालयले छानविनको नाममा दुःख दिने गरेकोले यहाँहरुको दुःख आफ्नो सम्झि त्यसको निकारणको लागि भरपुर सहयोग गर्नेछौं र कुनै पनि व्यापारिकलाई छानविन गर्नुपरेमा सरकारी कार्यालयले वाणिज्य संघलाई पूर्व जानकारी गराउने वातारण मिलाउनका लागि मेरो उम्मेद्वारी रहेको छ । त्यस्तै हामी कृषि प्रधान देशमा जन्मेर पनि आजको व्यापारीक युगमा व्यापार गर्न पूर्णरुपले सक्षम भईसकेका छौं ता पनि राज्यको नीतियम अनुसार हिसावकिताब चुस्त, दुरुस्त राख्न नजानेकाले विभिन्न समस्या झेल्नु परिरहेको छ । यसर्थ हामीलाई आवश्यकता अनुसार लेखा सम्बन्धी तालिम क्षेत्रगत वस्तुगत व्यावसायहरुलाई समेटेर तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि हाम्रो उम्मेद्वारी रहेको छ ।
५. जितेपछि के गर्ने योजना छ ?
– म संघको नेतृत्व गर्न चाहान्छु । यसले हिजोको नेपालगञ्जको रुप धारण गरिहेको छ । त्यसकारण यसलाई थप आकर्षण र सुविधासम्पन्न बनाउन साथै औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नका लागि विभिन्न निकायहरुसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने छौं । साथै बाँकेको सिमा बजार निर्भरता हटाउने अभियान थाल्ने छु । सिमाबजार र नेपालगञ्ज बजारले कोहलपुरको व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । व्यवसायी आक्रान्त छन् । सिमा बजार रुपैडिया र नेपालगञ्ज बजार प्रतिको निर्भरता न्युनिकरण गर्ने म र मेरो समूहको योजना छ । व्यवसायीमा कर शिक्षा नहुँदा विभिन्न समस्यामा पर्दै आएका छन् । त्यसका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई कर शिक्षा प्रदान गर्ने तालिम सञ्चालन गर्ने अभियान नै चलाउने छु । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत कोहलपुरलाई लगानी र उद्योग स्थापनाको गन्तव्य स्थान बनाउन पहल गर्ने छु । कृषि जडिबुडि,पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सम्भावनाको खोजी गरि लगानी वृद्वि गर्ने वातावरण सृजना गर्ने छु संघमा महिला, युवा, मधेशी, मुस्लिम र जनजातीहरुको उद्यम व्यवसायमा पहुँच स्थापित गर्न उत्प्रेरित गर्ने छु । समग्रमा कोहलपुरलाई विकास केन्द्रको रुपमा विकास र व्यापारीहरुको हितमा लड्ने हाम्रो समुहको प्रमुख एजेण्डा हो । उद्योगी व्यवसायीले सरकारको ठोस नीति नभएकाले व्यर्होनुको कानुनी समस्याका बारेमा पनि समाधानका विशेष प्रयास गर्ने हाम्रो टिमको प्रतिवद्वता रहेको छ ।
७. अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
– म र मेरो टिमका सम्पूर्ण उम्मेद्वारहरु उत्साहित र आशावादी छौँ । उद्योगी, व्यवसायी मतदाताहरु सचेत र सजग हुनुहुन्छ । उहाँहरुले उद्योगी, व्यवसायीहरुको हकहितका लागि काम गर्न सक्ने र यो उद्योग वाणिज्य संघलाई व्यापक बनाउने क्षमता भएको समूहलाई चुन्दै हुनुहुन्छ । त्यस्तो क्षमता भएको नेतृत्व लोकतान्त्रीक समावेशी व्यवसायी समूहसँग छ भन्ने कुराहरु सम्पूर्ण मतदाताहरुको निष्कर्ष रहेको पाएको छु । उद्योगी, व्यवसायीहरु मात्र होइन समग्र जिल्लाको विकासका सवालमा कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघले लिने पहलकदमीलाई पनि अर्थपूर्णरुपमा हेरेका छन् मतदाताहरुले । म उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा कोहलपुरमा संघर्ष गर्दै आएको छु । यो संघर्ष र आरोह–अवरोधका क्रममा मैले व्यक्तिगत र कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको माध्यमबाट उद्योगी, व्यवसायीहरुको हकहितका लागी काम गरिरहेको अवगत नै छ । संघमा मैले जुन खाले पद प्राप्त गरेको छु त्यसको अहिलेसम्म ईमानदारीपूर्वक काम गरेको छु । त्यसको मूल्यांकन उद्योगी, व्यवसायी ज्यूहरुले पक्कै मूल्यांकन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी उद्योगी, व्यवसायी ज्यूहरुले मलाई मत दिनुहुनेछ र त्यसको मैले उच्च सम्मान गर्दै उहाँहरुका हरेक सुझावहरुलाई आत्मसाथ गर्दै उद्योगी, व्यवसायीहरुको हकहितका लागि लाग्ने छु मैले यहाँ उद्योगी, व्यवासायीहरुको हकहितमा काम गरेकै हो र आगामी दिनमा पनि व्यापारीहरुका हितका लागि काम गर्ने विशेष चाहाना र अठोटका साथ चुनावी मैदानमा छु । हाम्रो सहकार्यबाट कोहलपुर बजारको सुन्दरता हरियाली, ढल व्यवस्थापन, फोहर मैला व्यवस्थापन, स्वच्छ र प्रदुषण मुक्त कोहलपुरको विकास, युवा वर्गहरुलाई स्वदेशमी रोजगारको वातावरण सिर्जनाका लागि विशेष पहल कदमी र योजना ल्याउने अठोटका साथ हामी लागि परेका छौँ । उपरोक्त उद्देश्य पूरा गर्न समेत मैले उम्मेद्वारी दिएको हँु । अन्त्यमा सम्पूर्ण कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको यही फागुन २२ गते हुनु गईरहेको निर्वाचनमा लोकतान्त्रीक समावेशी व्यवसायी समूह का उम्मेद्वारहरुलाई आफ्नो अमूल्य मत दिँई निर्वाचित गराई संघको विस्तृत विकास गर्न जिम्मेवारी दिनुहुने छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि सबै उद्योगी व्यापारी र सम्पूर्ण संघमा आवद्व सदस्यहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं । धन्यवाद ।